Ihe mmuta.ly: Ngwa nkuzi na nke imuta ihe | Martech Zone
Ihe nkuzi.ly: Ngwa nkuzi na mmụta
E nwere oge, ọkachasị na teknụzụ, na ịchọrọ ịnye nkuzi na ngwa ngwa maka ikpo okwu gị. Dịka ọmụmaatụ, anyị mepụtara CircuPress dị ka a onwe-ọrụ ọrụ email maka WordPress… ma ọ chọrọ ole na ole iji Mbido. Anyị nwere ike ịme vidiyo na-egosi nhazi, mana onye ọrụ ga-akwụsịzi / gaa n'ihu ka ha na-ele ma hazie akaụntụ ha. Kama, anyi na - ahazi a Ntọala CircuPress ihe na Mmụta - jikọtara ya na azịza - iji hụ na ha gafere ụkwụ aka nri!
Ozugbo ị mechara ihe ọmụmụ gị na ajụjụ nyocha, enyere gị kaadị kaadị dị mma:
Mmụta bụ ezigbo enyi anyị tọrọ ntọala ya. Max Yoder, a entrepreneur mpaghara, musician, videographer… na niile-gburugburu ezi Ihọd.
Mmụta na-enye ndị ọrụ ya ohere iwulite nkuzi mara mma, akara na nkeji na-enweghị otu akara koodu. Nwere ike ekenye ndị nkuzi gị ihe mmụta ma ọ bụ kekọrịta nkuzi gị na njikọ. Lesson.ly ga-ejikwa ihe ncheta iji jide n'aka na arụchara ọrụ gị n'oge. Njirimara nke Mmụta -agụnye:
Ọrụ - Kenye nkuzi na nzuzo ma ọ bụ kesaa njikọ ọha na eze, na-ahụ onye were nkuzi gị na mgbe.
Iche iche - nwere ike ekenye otu onye ma ọ bụ mepụta otu n'ime Ihe omumu iji kenye ma jikwaa ndi ozo.
Ndị ọkà mmụta - Lee otu onye ọrụ ọ bụla siri mụta ihe gị n'ọtụtụ ajụjụ ajụjụ.
Nkwado onyonyo na vidiyo - tinye ngwa ngwa ma ọ bụ vidiyo na nkuzi gị.
Nchịkọta na Nkwupụta - Mmụta na-edekọ ndekọ nke ọzụzụ ndị nkuzi gị na akụkọ ihe mere eme - site n'otú ha si zaa ajụjụ a kapịrị ọnụ ruo ụbọchị na oge ha mechara ma ọzụzụ dị mkpa na nke nhọrọ.
nnabata - Mmụta tracks adreesị IP maka nnabata iwu.
Tags: mmụtammụta ngwankuzi ngwankuziiheajụjụoziziozizi ngwa